Fiangonana anglikanina Ambatoharanana : Vita amin’ny endriny vaovao -
AccueilRaharaham-pirenenaFiangonana anglikanina Ambatoharanana : Vita amin’ny endriny vaovao
27/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy teo, ny asa fanavaozana ny fiangonana anglikana Santa Paoly Ambatoharanana, ao amin’ny kaominina Merimandroso, ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Isan’ny nohavaozina ny vatan-drindrina vita amin’ny vato manontolo, ny tafo sy valin-drihana, ny varavarana sy ny fanaka vitsivitsy. Fanavaozana izay tanteraka noho ny famatsiam-bola avy amin’ny fitondram-panjakana. Raha tsiahivina, ny volana Aogositra 2015 no hitan’ny minisiteran’ny Kolontsaina fa mila fanarenana ity fiangonana ity ka nandray andraikitra avy hatrany ny fanjakana tamin’ny fanamboarana rehetra, noho izy, vakom-pirenena. Tonga nanome voninahitra izany teny an-toerana ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, Rajaonarimampianina Hery, sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, ka ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Hagay 2
“ Aza matahotra, mahandrasa”, no novoaboasan’ny Filoham-pirenena nandritra ny fandraisany fitenenana. Ary notsipihiny tsara fa tsy mampanantena ny zavatra tsy ho vitany ny Filoha tamin’ny filazana fa, « Izay zavatra ampanantenaiko dia tsy maintsy vitaiko », ary “Misaotra an’Andriamanitra isika tamin’ny nanomezany ity fiangonana ity sy nahafahantsika nivory eto anio. Fantako amin’ny anarana Ambatoharanana, hatramin’ny fahazazako, ary fantako avokoa ny asa ara-pivavahana izay iandraketany. Ary raha vao nolazaina ny finiavany hanavao ny fiangonana aho dia tsy nihambahamba nanampy, ka izao vita soa aman-tsara izao. Izay ohatra iray amin’ny fanamby ataon’ny kristianina”, hoy ny fanazavan’ny Filoha Rajaonarimampianina.
Fanahy madio… antoka amin’ny fampandrosoana
Marihina fa ny taona 1882 no niorina ny trano fiangonana anglikana Santa Paoly. Ity ny trano fivavahana anglikana midadasika indrindra, namboarina tamin’ny taona 1878 ka ilay misionera anglikana voalohany indrindra tonga amintsika no nanorina izany, natao hampiantranoana indrindra ny seminera izay fampiofanana ireo “presbytères”, ary nosokajiana ho vako-pirenena tamin’ny taona 1978. Hatramin’izay 135 taona nisiany izay, tsy nitsahatra ny nitondra ny tenin’Andriamanitra manerana ny Nosy ity fiangonana ity. Ary manoloana izay indrindra, nanambara ny Filoha tamin’ny fakana ohatra tamin’ny apostoly Paoly fa zava-dehibe tokoa ny asa iandraiketan’ny fiangonana anglikana satria “Mila fahalalana ny kristianina hiatrehana sy hanafoanana ny aretin’ny firenena, satria fananana fanahy madio sy mpivavaka be no antoka ho amin’ny fampandrosoana.”
Nanolotra 4 tapitrisa ariary
Nandritra ny fandraisany fitenenana hatrany no nilazan’ny Filoha tamin’ireo mpino kristianina ny hafatry ny Arsevekan’ny Canterbury, Justin Welby, any Londres tamin’ny fihaonan’ny roa tonta. Nanoro hevitra ahy izy mba hampahomby ny fampihavanana. “Mitovy amin’ny fiangonana ny andraikitrao. Safidio tsara ny olona hiarahanao miasa ary ampirisiho hiasa ao anatin’ny finoana ho an’ny fampandrosoana izy ireo », hoy ny Arsevekan’ny Canterbury.
Ankoatra ireo rehetra ireo, nanolotra vola 4 tapitrisa ariary tamin’ny anaran’ny Filoha mivady ny Filoham-pirenena ho an’ny asa rehetra atao amin’ny fiangonana Santa Paoly. Rehefa tapitra kosa ny fotoam-pivavahana, nitsidika ny tahirim-bakoka, izay tranon’ireo misionera anglikana voalohany, sy ny trano efa niorina teo taloha, ny Filohan’ny Repoblika. Ity trano efa haolo ity izay lasa tranom-boky sy ny trano fampiofanana. Tsy nijanona hatreo fa nanambara ihany koa fa hamboarina ny lalan-tany mampifandray amin’ny Ambatoharanana.